मा.प.से. जाँचेजसरी एक मिनेटभित्रै कोरोना पत्ता लगाउने उपकरण बन्यो
गृहपृष्ठ » स्वास्थ्य » मा.प.से. जाँचेजसरी एक मिनेटभित्रै कोरोना पत्ता लगाउने उपकरण बन्यो
काठमाडौ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षणको नतिजा किन ढिला भएको होला ? सबैलाई चिन्ताको विषय बनेको छ ।
रिपोर्ट आउँदा नआउँदै धेरैको मृत्यु भएपछि यसलाई जतिसक्दो छिटो पत्ता लगाउने प्रविधिकोपनि विकास भइरहेको छ ।
जसरी खोप बनाउँन प्रयास भइरहेका छन् त्यसरी नै यो प्रविधिको विकासका लागिपनि धेरै प्रयास भइरहेका छन् ।
विश्व यो कोरोना भाइरसले २ बर्षदेखि तहसनहस भएको छ । यसबाट छुटकारा पाउनका लागि धेरै प्रयासहरु भइरहेका छन् ।
अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर झन् खतरनाक बनिरहेको छ । यसले मानिसलाई निक्कै असर गरिरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतसँगै नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले दिनदिनै संक्रमण फैलाइरहेको छ।
यसबाट मृत्युको दरपनि अत्याधिक रहेको छ । यो भाइरसबाट कसरी छुटकारा पाउने भनेर चिन्ता बढेको छ ।
कोरोना देखापरेदेखि नै विश्वका वैज्ञानिकले यसबारे विभिन्न अनुसन्धान गरिरहेका छन्। यसलाई जतिसक्दो छिटो पत्ता लगाउने प्रविधिको खोजी गरे ।
यसै क्रममा सिंगापुरमा वैज्ञानिकले जम्मा १ मिनेटमा कसैलाई कोरोना संक्रमण छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने उपकरण विकास गरेको खबर आएको छ । मानिसको सासबाट यस उपकरणले त्यस व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण कि छैन भनेर पत्ता लाग्ने वैज्ञानिकले दाबी गरेका छन्। हा गरेर सास मेसिनमा पठाउनसाथ भाइरस संक्रमण छ या छैन भन्ने पत्ता लाग्नेछ । भारतीय सञ्चारमाध्यले यो उपकरण विकास गर्ने एक जना प्राध्यापकको जन्म भारतमै भएको दाबी गरेको छ।
ब्रे’थो’नि’क्स कम्पनीले बनायो डिभाइस
नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर (एनयूएस) का तीन स्नातक र भारतमा जन्मिएका एक प्राध्यापक मिलेर सास सुँघेरै कोरोना पत्ता लाग्ने यन्त्र बनाएका हुन्। यो मा.प.से. पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने सानो मेसिन जस्तै छ । बोकेर हिँड्रनपनि सजिलो छ । सिंगापुरमा हाल एन्टिजेन र्‍यापिड टेस्टसँगै सासका माध्यमबाट संक्रमण पत्ता लगाउने परीक्षण गरिन्छ।
‘ब्रे’फे’न्स गो कोभिड–१९ ब्रिथ टेस्ट सिस्टम’ नामको यस उपकरण एनयूएसको ब्रे’थो’नि’क्स कम्पनीले विकास गरेको हो।
सासबाट कोरोना पत्ता लगाउने पहिलो उपकरण
सासबाट कोरोना पत्ता लगाउने यो नै पहिलो उपकरण हो। अधिकारीका अनुसार यस उपकरणबाट तुरुन्त नतिजा थाहा पाउन सकिन्छ। निर्माता कम्पनी ब्रे’थो’नि’क्सले यो उपकरण ट्राफिक प्रहरीले मा.प.से. चेक गर्न प्रयोग गर्ने उपकरणजस्तै गरी कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउन सकिने जनाएको छ। यो भयोपनि दुर्गम सम्मपनि पठाउन सकिन्छ । यसले धेरैलाई सहज बनाउन सकिन्छ ।
कम्पनीका अनुसार कोरोना परीक्षण गर्ने यस उपकरणमा सम्बन्धित व्यक्तिले एकपल्ट फु गर्नुपर्छ। यसो गर्दा उपकरणभित्र सास जान्छ र यसपछि उपकरणमा रहेको लर्निङ सफ्टवेयरको सहायताबाट व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउँछ।
विशेष कुरा के हो भने जम्मा १ मिनेटभित्र यो प्रक्रिया पूरा हुन्छ। अहिले जारी नमुना (स्वाब) संकलन, पीसीआर गर्नुपर्ने झन्झट तथा लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थामा यो उपकरण वरदान हुने ठानिएको छ।
परीक्षण प्रभावकारिता ९३ प्रतिशत
सासबाट कोरोना पत्ता लगाउने यो उपकरणले अहिलेसम्म तीन चरणको क्लिनिकल परीक्षण पूरा गरिसकेको छ। दुई चरणको परीक्षण सिंगापुरमै र एक चरणको परीक्षण दुबईमा गरिएको हो।
यस क्रममा कोरोना परीक्षणमा यसको प्रभावकारिता ९३ प्रतिशत देखिएको वैज्ञानिकले बताएका छन्। जबकी अरु किटहरुमा त्यतिपनि विश्वास हुँदैन । यसैले अब यो नै प्रभावकारी बन्नसक्ने र यो त्यति खर्चिलोपनि नहुने भएकाले विश्वभरी नै यही मेसिन लोकप्रिय बन्ने आँकलन गरिएको छ । एजेन्सी